Burmese Poetry Foundation: November 2010
ကဗျာတွေ ရှင်ချင်ရင် ကဗျာဆရာတွေ သေဖို့သာပြင်ပေတော့...
ကဗျာဆရာ လှသန်း(ကြည်မောင်သန်း)ဟာ ၉၀ ခု ကဗျာဆရာများ အနက်က ထင်ရှားတဲ့ ကဗျာဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စာပေစီစစ်ရေးရဲ့ လက်ချက်နဲ့ မကြာခဏ ကလောင်အမည် ပြောင်းရေး နေရသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကဗျာများနဲ့ ယခု ဖော်ပြမယ့် အင်တာဗျူးကို ဘလော့အချို့မှာ တင်ထားပြီး ဖြစ်ပေမယ့် BPF Group အနေနဲ့ဗမာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့ ချန်လှပ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဖြစ်စေရန် စိတ်ကြိုက် ကဗျာတပုဒ် နှင့်အတူ တင်ဆက် လိုက်ပါကြောင်း။
Burmese Poetry Foundation group
ကဗျာဆိုတာ ပဟေဠိဝှက်တမ်းကစားနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဆုံးမစာလိုလို နိတိလိုလို ပညာပေးနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ စတုရန်းတွေ၊ တြိဂံတွေထဲအပေါစား စာသားထည့်ပြီး ကလေးတွေ တီဗီဂိမ်း ဆော့သလို ဆော့ရတဲ့အရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စကားလုံးတွေ လော်မာပြီး အဓိပ္ပာယ်မဲ့ အဆက်စပ်မဲ့ ထင်ရာမြင်ရာ ရေးနေတဲ့ စကားလုံးစွပ်ပြုတ်မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်တို့ လူငယ်တွေဟာ ကုန်းဘောင်ခေတ်က ဦးပုည၊ အချုပ်တန်းဆရာဖေတို့ရဲ့ တေးထပ်တွေကိုလည်း တန်ဖိုး အနဂ္ဂထားပေရဲ့၊ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ မဟာလေးချိုးကြီးတွေဟာလည်း နှလုံးသားထဲ ခေတ်အဆက်ဆက် ခုန်ကြွနေပေလိမ့်။ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်တိုရဲ့ ခေတ်စမ်းကဗျာများဟာလည်း ရာစုအဆက်ဆက် ၀င်းပြက်နေပေလိမ့်၊ စာပေသစ်မုခ်ဦးက ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ကြည်အေးတို့ ကဗျာတွေကလည်း ကျနော်တို့သွေးသားထဲ မြစ်ကြီးတမြစ်လို တသွင်သွင် စီးဆင်းနေဆဲပါ။
စာပေပုံသဏ္ဌာန်တရပ်ဟာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ (မိဘမဲ့ အဖမဲ့သားတွေ မဟုတ်ဘူး။) ခေတ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ခေတ်စမ်းရဲ့ နောက်မြီးဆွဲ န၀ဂန္ထ၀င်ကဗျာတွေကိုလည်း မပစ်ပယ်ခဲ့ပါဘူး။ ခေတ်နဲ့ အံမ၀င်တော့တဲ့အခါ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အနုပညာတွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ထဲ ခံ့ခံ့ညားညား နေရာယူခဲ့ကြပါတယ်။ အသစ်ကို မြတ်နိုးတဲ့ လူငယ်များဟာ အတားအဆီးတွေ၊ အတန်းအစားတွေ၊ အပိတ်အဆို့တွေကြားက ရုန်းကန်ဖူးပွင့်လာရတာဟာ ဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးနဲ့လူငယ် အဟောင်းနဲ့အသစ် ပဋိပက္ခအတွက်ကတော့ ခေတ်တိုင်းမှာ ရှိနေမှာပါပဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ဂန္ထ၀င်ကဗျာတွေကို မပစ်ပယ်ခဲ့ပါဘူး။ နှလုံးသားထဲက မြတ်မြတ်နိုးနိုး တန်ဖိုးထား သိမ်းဆဲထားဆဲပါပဲ။
ကနေ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို စူးရှထက်မြက်စွာ တစိုက်မတ်မတ် ရေးဖွဲ့နေသူကတော့ ကဗျာဆရာကြည်မောင်သန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်မောင်သန်းရဲ့ မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း ၁၉၈၂ မှာ ‘ပေါင်ချိန်ကြစို့’ ကဗျာကို မှတ်မှတ်ရရ စတင် ဖတ်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၉ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြည်မောင်သန်းရဲ့ နိမိတ်ပုံတွေ၊ သင်္ကေတတွေ၊ စကားလုံးခွန်အားတွေဟာ ကဗျာဖတ်သူရဲ့ သွေးကြောထဲ စိုက်ထိုးလိုက်သလို ပူနွေးသွားပြီး အလင်းတခု ပွားလာသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကြည်မောင်သန်းရဲ့ ကဗျာတွေထဲက ‘လက်’ ‘ရေသူမနဲ့ ညစာစားခြင်း’ ကဗျာတွေဟာ ကဗျာဖတ်သူရင်ထဲကို စွဲထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာကြည်မောင်သန်းရဲ့ သွေးခုန်နှုန်းကို တိုင်းထွာနိုင်ဖို့ ပန်းအလင်္ကာစာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ကဗျာဆရာအဖြစ် ရွေးချယ်ပုံကို သိပါရစေ။
ဖြေ - ကဗျာဆရာအဖြစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စာတွေဖတ်၊ ကဗျာတွေဖတ်၊ သီချင်းနားထောင်၊ ဂစ်တာတီး၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်း အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ ကဗျာရေးချင်စိတ် ပေါ်လာပြီး ကဗျာတွေစမ်းရေး၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ကဗျာတွေ လှမ်းပို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ရှုမ၀၊ မိုးဝေ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ မိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမှာ ‘ဆူးလေဘုရားလမ်းရဲ့ ရာဇ၀င်’ ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စာမူခ မရပါဘူး။ စာအုပ်လက်ဆောင်ပဲ ရပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကဗျာတွေ ဆက်ရေး၊ မဂ္ဂဇင်းတေါကို စာမူဆက်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပယ်ခံရတာလည်း ရှိ၊ ဖော်ပြခံရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘ၀မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ် အမျိုးမျိုး ကျင်လည်ခဲ့ပေမယ့် ကဗျာရေးချင်စိတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ ကဗျာတွေ ရေးနေခဲ့တာပါ။ ရေးချင်တဲ့အခါလည်းရေး၊ မရေးချင်တဲ့အခါလည်း မရေး၊ မဂ္ဂဇင်းတွေဆီ ပို့ချင်တဲ့အခါလည်း ပို့၊ မပို့ချင်တဲ့အခါလည်း မပို့ဘဲ နေခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ကဗျာရေးမယ်၊ ဘွဲ့ရမှ ကဗျာရေးမယ်၊ ပင်စင်ယူပြီးမှ ကဗျာရေးမယ်၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိမှ ကဗျာရေးမယ်၊ ဘ၀မှာ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတော့မှ ကဗျာရေးမယ်၊ လူရင်ဝင်ချင်လို့ ကဗျာရေးမယ်၊ ဘ၀မှာ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတော့မှ ကဗျာရေးမယ်၊ လူရာဝင်ချင်လို့ ကဗျာရေးမယ်။ တွေ့ကရာတွေ လျှောက်ရေးပြီး ကလောင်နာမည် လူသိမှ ကဗျာရေးမယ် စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း လုံးဝမဟုတ်ပါ။ တစ်ဆက်တည်း ဆက်ပြောရရင် ကဗျာရေးလာတာ ပုံနှိပ်စာလုံး စဖြစ်ချိန်က စ ရေတွက်ရင် ၂၄ နှစ်ကျော် ရှိပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကဗျာဆရာလို့ မခံယူရဲသေးပါ။ ကဗျာဆရာဆိုတာ ကဗျာဖတ်သူနဲ့ အချိန်ကာလက သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကဗျာရေးသူလို့ပဲ ခံယူပါတယ်။
လေးစားအားကျခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကဗျာဆရာတွေကို ပြောပြပါလား။
ဖြေ- ပြောရရင်တော့ ဖတ်ဖူးသမျှ ဂန္ထ၀င်ကဗျာဆရာအားလုံးကို ကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့က သေချာပြီးသားမို့ပါ။ ကြိုက်ခဲ့တာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ပြည်တွင်းကဆို ဂန္ထ၀င်ရော၊ ခေတ်စမ်းရော၊ တာရာခေတ်၊ မိုးဝေခေတ်ကနေ ဒီနေ့ကဗျာတွေအထိ ကြိုက်တာတွေ အများကြီးပါ။ စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်သလောက် ပြောရရင် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၊ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ၊ ရှင်ဥတ္တမကျော်လည်း ကြိုက်တာပဲ၊
ဦးကြင်ဥ၊ ဦးကြော့လည်း ကြိုက်တာပဲ။
စိန္တကျော်သူဦးသြ၊ ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာလည်း ကြိုက်တာပဲ။
ဖိုးသူတော်ဦးမင်း၊ လူဦးမင်းတို့လည်း ကြိုက်တာပဲ။
ဦးပုည၊ အချုပ်တန်းဆရာဖေလည်း ကြိုက်တာပဲ။
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ ဇော်ဂျီ၊ မင်းသုဝဏ်တို့လည်း ကြိုက်ပါတယ်။
မောင်သင်းပန် (နာမည်တွေ ကောက်သင်းကောက်နေရလို့ တချို့ လေးစားအားကျပေမယ့် မေ့နေတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ခွင့်လွှတ်ပါ)။
ပြည်ပကဆိုရင်လည်း (ဘာသာပြန်တွေကတဆင့်) ရှိတ်စပီးယား၊ ဒန်တေ၊ ဂွယ်ထည်၊ တဂိုးတို့လည်း ကြိုက်တာပဲ။ မာယာကော့ဖ်စကီး၊ နီရူဒါ၊ ဘားတော့ဗရက်၊ အိုက်ကျင့်လည်း ကြိုက်တာပဲ။ အိလိယော့၊ ဒလန်တောမတ်လည်း ကြိုက်တယ်။ အော်ဒင်၊ စီဒေးလူးဝစ္စ၊ စတီဖင်စပါဒါလည်း ကြိုက်တာပဲ။ အမေရိကန်က အလန်ဂျင်းစဘတ်၊ ရုရှက ယက်ဖတူရှင်ကို၊ ဘောစနက်စင်စကီး၊ ပြင်သစ်က ဂျက်ကွက်ပရေးဗား၊ ဂျာမနီက အိုက်ဇင်ဘာဂျာ၊ အီတလီက ကွာစီမိုဒို၊ အရှေ့ဥရောပက ဟိုးလမ်၊ ပိုပါ၊ ဟားဘတ်တို့လည်း ကြိုက်ပါတယ်။ နောက် အိုက်ယာလန်က ရှေးမတ်စ်ဟေနီ၊ မက္ကစီကိုက အောက်တိုဗီယိုပါဇ် စသည်ဖြင့် ကြိုက်ပါတယ်။ နောက် တောင်အာဖရိက၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားက အမည်မမှတ်မိတော့တဲ့ မော်ဒန်ကဗျာဆရာတွေကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။
ဖြေ- စာနဲ့ပတ်သက်ရင် အစုံဖတ်ပါတယ်။ လက်လှမ်းမီသရွေ့ အချိန်ရှိသရွေ့ပေါ့ဗျာ။ သိုင်းဝတ္ထု၊ တက်ကျမ်းနဲ့ ဆုံးမစာတွေကလွဲရင်ပေါ့ဗျာ။ သမိုင်းစာအုပ်တွေ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်တွေလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်တွေကို ဖတ်သလို ၀တ္ထုရှည်ကြီးတွေကိုလည်း အချိန်ပေးဖတ်ပါတယ်။ ဘက်စ်ဆဲလားတွေကိုလည်း အချိန်ရရင် အင်တာတိန်းမင့် အနေနဲ့ ဖတ်ပါတယ်။ ရုပ်ပြတို့၊ ကာတွန်းတို့လည်း ဖတ်ပါတယ်။ အက်ဆေးနဲ့ ကဗျာကတော့ ဦးစားပေးပေါ့ဗျာ။ တစ်ခါတစ်ရံ အမျိုးသားစာပေကို ဖတ်ပါတယ်။
ကဗျာတပုဒ်ရဲ့ အသက်နဲ့ ပန်းတိုင်က ဘာလဲ။
ဖြေ- ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ အနုပညာမြောက်စွာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကဗျာဖတ်သူကို ကျေနပ်ခံစားစေရရင် လိုရင်းရောက်တယ် ထင်တာပဲ။
ပုံသဏ္ဌာန် နဲ့ အကြောင်းအရာ ဘာက ပိုအရေးကြီးပါသလဲ။
ဖြေ- ဘယ်ဟာကမှ ပိုအရေးမကြီးပါဘူး။ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ပို့စ်မော်ဒန်ကဗျာတွေက ဗဟိုချက် မဲ့ရမယ်လို့ တချို့က ပြောကြတယ်။ အခု ကိုကြည်မောင်သန်းရေးနေတဲ့ ကဗျာတွေက ခင်ဗျားရဲ့ဘ၀ကို ဗဟိုချက်ပြုရေးနေတာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဖြေ- ပို့စ်မော်ဒန်ကဗျာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ လူတွေဆွေးနွေးပြောဆိုကြပါစေ။ ကျွန်တော့ကဗျာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျွန်တော်ရေးချင်သလို ရေးပါမယ်၊ တခြားဟာလည်း ရေးချင်ရေးပါတယ်။
ကိုကြည်မောင်သန်းက ကဗျာဆရာ ဖြစ်မလာရင် ဘာဖြစ်လာမယ် ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ - ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ ကဗျာရေးသူ ဖြစ်မလာရင် ကဗျာဖတ်သူတော့ ဖြစ်နေမှာပဲ။
ကနေ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီးဆင်းနေသလား။ ရေစီး တန့်နေပါသလား။
ဖြေ - ကနေ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့လည်း မစီးဆင်းပါ။ ရပ်တန့်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ ပုံမှန် စီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ဖြေ - များများဖတ်၊ နည်းနည်းရေး။
ကိုကြည်မောင်သန်းရေးတဲ့ ‘လက်’၊ ‘ရေသူမနဲ့ ညစာစားခြင်း’၊ ‘အာရှတိုက်ရဲ့တနေရာ’၊ ‘တောင်အမေရိကကို သွားချင်တယ်’ ကဗျာတွေထဲက ဘယ်ကဗျာကို ပိုပြီး အားရသလဲ။
ဖြေ - ကိုယ့်ကဗျာတွေ ကိုယ်ပြန်ဖတ်ပြီး တခါတလေ အားရသလိုပဲ၊ တခါတလေတော့လည်း အားမရဘူး။
ကိုကြည်မောင်သန်း ကဗျာလုံးချင်းထုတ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိ မရှိ သိပါရစေ။
ဖြေ - အခြေအနေပေးတဲ့ တနေ့ပေါ့ဗျာ။ ခုထက်ထိ မောင်လေးအောင် တကိုယ်တော် ကဗျာလုံးချင်း မရှိသေးဘူး။ မောင်လူမှိန်လည်း မရှိသေးဘူး။ ဖော်ဝေးတို့၊ မြေချစ်သူတို့တောင် ကွယ်လွန်ပြီး တော်တော်ကြာမှ ကဗျာလုံးချင်းတွေ ထွက်လာကြတာပါ။ ကဗျာရေးတဲ့သူအတွက် ကဗျာလုံးချင်း ရှိရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။ မရှိရင်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
ကိုကြည်မောင်သန်းနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ထဲက ကြိုက်တဲ့ကဗျာဆရာတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။
ဖြေ - မောင်ပြည့်မင်း၊ ခင်အောင်အေး၊ နေမျိုး၊ မိုဃ်းဇော်၊ ခိုင်မြဲကျော်စွာ၊ မောင်ဖီလာ၊ ဇော်ယုပိုင်၊ မင်းနိုင်သား၊ ကြည်ဇော်အေး၊ နောက် မဂ္ဂဇင်းကို ကဗျာ ဘယ်တော့မှ မပေးတဲ့ ကျောက်ဆည်က တည်ဘွားဦး၊ မှော်ဘီက ၀င်းဇော်လွင်။
စတုဂံတွေ၊ တြိဂံတွေထဲမှာ စာတွေသွပ်ပြီး ပို့စ်ကဗျာလို့ ပြောနေတဲ့ လူတွေကို ကိုကြည်မောင်သန်း ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ - သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြပါစေ။ အပေါ်လီနဲ့တို့လည်း လုပ်ခဲ့တာပဲ။ ၀ါသနာပါသူတွေ လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြပါစေလေ။
ကိုကြည်မောင်သန်းဟာ ‘မန္တလေး ထန်းရိပ်ညိုဆု’၊ ‘ပျဉ်းမနားအလယ်ရိုးမဆု’၊ ‘ဦးဝင်းငြိမ်းရဲ့ ရွှေအမြုတေစာပေဆု’ တွေ ရထားတဲ့ ကဗျာဆရာတဦး အနေနဲ့ ဆုပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားရဲ့အမြင်ကို သိပါရစေ။
ကျနော် ၁၉၉၈ မှာ ‘မန္တလေးစာဖတ်သူများရဲ့ အကြိုက်’ ကဗျာဆု (ထန်းရိပ်ညိုဆု မဟုတ်သေးပါ)၊ ၂၀၀၆ မှာ ‘အလယ်ရိုးမကဗျာဆု’၊ ၂၀၀၆ မှာပဲ ‘ရွှေအမြုတေကဗျာဆု’တွေကို ရခဲ့ပါတယ်။ ဆုပေးတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အနုပညာကို အသိအမှတ်ပြုတာပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ငွေလည်းရတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုရလို့ဆိုပြီး ဘ၀င်မြင့်စရာ၊ ကြီးကျယ်စရာအကြောင်း မရှိပါ။ ဆုမရပေမယ့် တော်တဲ့ ကောင်းတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ၊ ကဗျာတွေ အများကြီးပါ။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ အကယ်ဒမီရပြီးရင် အနုပညာကြေး ပိုရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ကဗျာဆုရပြီးတဲ့ ကဗျာရေးသူကတော့ ကဗျာစာမူခ ပိုတောင်းလို့ မရဘူးဗျို့။ ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈
(မူရင်း - ပန်းအလင်္ကာ မဂ္ဂဇင်း)
ကျမ ကလစ်တယ် အဲဒါကြောင့် ကျမ တည်ရှိတယ်
မင်စော်နံ မနက်သတင်းစာကို ဖြန့်ဖတ်မယ့်အစား အနံ့မထွက်တဲ့
အင်တာနက်ကိုအရုဏ်ဦးမှာ ကျမ ဒဗ္ဗလ် ကလစ်လိုက်တယ်
သတင်းစာ ပုံနှိပ်စာမျက်နှာအတိုင်း ဖော်ပြတဲ့ PDF ကို ကလစ်လိုက်တယ်
ရေတိုနိုင်ငံခြားကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
တစ်ခါ ကလစ်လိုက်တိုင်း သတင်းစာ စာမျက်နှာ ပြောင်းသွားတယ်
ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်တိုက် ကလစ်လိုက်တယ်
ကလစ်တစ်ချက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ခု ပြိုလဲသွားပြီး နောက်တစ်ခု တက်လာတယ်
နေလုံးပေါ်လာတယ် နေလုံးထဲမှာလဲ chip တစ်ခုထည့်ထားတယ်။
စာမျက်နှာ ၁၂ မျက်နှာပါရှိတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်
‘လက်မောင်းထဲက နဗ်ကြောအဆောက်အအုံထဲအစားထိုး ထည့်သွင်းထားတဲ့
microscopic electrodeတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ခန္ဓာ ထဲကFiber optics
wireless signal တစ်ခုနဲ့ ကွန်ပြူတာဟာ အဆက်အသွယ်ရလိုက်တယ်’
ပထမဦးဆုံးလူသား ရိုဘော့တ်ကို စိတ်ကူးကြည့်ခဲ့သူ ကက်ဗင် ဝေါရစ်က်ရဲ့
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကလစ်လိုက်တယ်ကျမဟာ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲ ဝင်ရောက်လည်ပတ်သူ
အဲဒီထဲ ကျမ ထည့်သွင်းချင်လိုက်တဲ့ မျိုးဗီဇတစ်ခုရှိတယ်
ညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ မောက်စ်ကို လျှောက်ရွှေ့ပြီး ကျမ အီးမေးလ်ကို
ညက မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု ဝင်နေတယ် တိုရွန်မြို့က ပို့လိုက်တဲ့ အတက်ခ်ျဖိုင်ကို
နှင်းဆီနီရဲတွေ ပွင့်ချပ်တွေကနေ နှင်းပေါက်ကလေးတွေ ကျနေတယ်
အဖြူရောင်စည်းရိုးထဲမှာ ဝေဆာပွင့်ဖူးလို့ အခကြေးငွေပေးစရာမလိုတဲ့ အင်တာနက်ဖုံးရဲ့
dial pad ကို
ကျမ ချက်ခြင်း ကလစ်လိုက်တယ် K ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ကလစ်လိုက်တယ်
၆၅၈၉ မိုင် အကွာအဝေးကနေ အဆက်အသွယ်ရသွားတယ်
ညာဘက်လက်နဲ့ မောက်စ်ကို လျှောက်ရွှေ့ပြီး စာပေ အနုပညာကို
ကျမ ကလစ်လိုက်တယ် စာနယ်ဇင်းတွေ ကျမ ကလစ်လိုက်တယ်
အနုပညာစာပေ ဝက်ဘ်ဇင်း ဝတ္ထုရဲ့ ဧပြီလထုတ်ကို ကလစ်လိုက်တယ်
မင်းသားလေးက ပြောတယ် ‘သဲကန္တာရဟာ လှပတယ်
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သဲကန္တာရဟာ စမ်းချောင်းလေးကိုဝှက်ထားလို့’
သူ့အနီးပါတ်ဝန်းကျင်က မြင်ကွင်းတွေ အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲတယ်
ဝင်းဒိုးကို ပိုချဲ့လိုက်တယ် အင်တာနက် စာအုပ်ဆိုင် အာလာဒင်ကို
ကလစ်လိုက်တယ် ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာအုပ်သစ်စာရင်းကို ကြည့်တယ်
ပေါလ် အက်စတာရဲ့ ‘ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှု ဂီတ’ ကို ၂၀ လျှော့ဈေးနဲ့
မှာဖို့ ကျမ ကလစ်လိုက်တယ်
ပြီး..၁၅ လျှော့ဈေးနဲ့ရတဲ့ ရနေး ဂျီရာ့ဒ်ရဲ့ ‘အကြမ်းဖက်မှုနှင့်
ကျမ ဝင်းဒိုးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ခြံထွက်သီးနှံတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့
လောကီ အဖြစ်အပျက်တွေ အချင်းချင်း ဆောင့်မိ တိုက်မိ နေကြတယ်
၄ ချက် စည်းဝါး နရီအတိုင်း ကုန်းချပ် ကုံးချပ် ကုန်းချပ် ဂျာ ကုန်းချပ်
အဲဒီ နရီကို ကျမ ဆက်ယူရင်း အဲဒီ ကုန်တင်ကားရောက်နေတဲ့ လမ်းကို
အားအားလျားလျား ကြည့်လိုက်တယ် မြေပုံကို ကလစ်လိုက်တယ်
ဆိုးလ်မြို့က ထွက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနောက်လိုက်သွားတယ်
ဝှာအုံ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆီ ရောက်သွားတယ်
ဘုရားရှိခိုးရာ အတွင်းခန်းရဲ့ရှေ့မှာ ခင်းကျင်းထားတဲ့ ဂျပန်ဖယောင်းပန်းတွေကနေ
လက်အုပ်ချီပြီး ဘုရားစာ ဆိုလိုက်တယ်
ချိရိ တောင်တန်းမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ကွန်ဒိုတစ်လုံးကို ၆၀ လျှော့ဈေးနဲ့
ဝယ်လို့ရမယ့် ကူပွန်ကို ကျမ ကလစ်လိုက်တယ်
ပရင်တာအောက်ကနေ ကျမဒူးပေါ် ဂျပန်ဖယောင်းပန်းပွင့်ချပ်လို
ကူပွန်တစ်ခု ကျလာတယ် ဂျပန်ဖယောင်းပန်းပွင့်ချပ်မှာ ပါရှိတဲ့
I ကို ကျမ ကလစ်လိုက်တယ်
သုညတွေနဲ့ ဆိုက်ဒ်ပေါင်း ၁၇၇ ခု ပေါ်လာတယ်
I အတွက် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ရလဒ် ဒါပေမယ့် I (ကျမ) ဘယ်မှာလဲ
I ကို ရှာရင်း ဆိုဒ်တစ်ခုစီကို ကလစ်ကြည့်တယ်
India အရူးရုပ်ရှင်ကား I…splIt I ဘက်က ကွာရှင်းတယ်
I တစ်ယောက်တည်း တရားစွဲမလား ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း
I ပြောပြချင်သော ဇာတ်လမ်းများ နဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး
ဘို့ နှစ်လုံးပါရှိတဲ့ ကုလားအုတ်တွေရဲ့ ခွာကလစ်သံကို ကျမ ကြားတယ်
ဆက်ပြီး ကျမ ကလစ်လိုက်တယ်
အဲဒါကြောင့် ကျမ တည်ရှိတယ်။ ။
ဇေယျာလင်း၏ “ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာကို ချဉ်းကပ်ခြင်း ၁ ” မှ
Labels: ဘာသာပြန်ကဗျာ, ဇေယျာလင်း
Rather than spread open the morning paper smelling of ink
at dawn I lightly double-click onto the odorless Internet
I click the complimentary PDF that shows me
exactly the image ofaprinted newspaper page
The KOSDAQ has no wings now
Total short-term foreign debt of 50,000,000,000 dollars
With each clickapage of the newspaper turns
I continuously click the world
Withaclick one world collapses and
The sun floats up There’sachip installed in the sun too
I look ata12-page article: ‘The computer picks up
a wireless signal from my body in which fiber optics carrying
microscopic electrodes have been grafted into my arms’ nerve structure.’
and click onto the website of Kevin Warwick who dreams of the first-ever
human robot I am the 28,412th visitor
I haveagene I want to insert too
With my right hand’s forefinger moving the mouse around
I click onto my e-mail A message arrived last night also
I click the attached file that k of Toronto has sent
Red roses drip dew from their petals and
Bloom insideawhite picket fence
The flowers sent by k haven’t wilted
I immediately click on the dialpad of the free Internet phone
I click k’s phone number
I become connected across 6589 miles
Even I may beaprogram that someone’s installed
Moving the slippery mouse around with my right hand I
Click on literature I click on periodicals
I click into the April issue of the literary webzine Novel
The ‘Little Prince’ on the cover who says ‘The desert is beautiful
because somewhere it’s hidingaspring.’
constantly changes the scene around him I open the windowabit more and
click onto the Internet bookstore Aladdin I look at the list of new publications
I click to order Paul Auster’s The Music of Chance ata20% discount
and René Girard’s Violence and the Sacred at 15% off
Outside my window mundane affairs bumping around
insideaproduce truck inafour-beat rhythm koong-chak koong-chak koong-chak-ja koongchak
I take up the four-beat bongjak music time and
idly looking at the street the truck is on click its map
I follow one of the routes out of Seoul and arrive at
Hwaôm Temple The sound ofawooden bell spreads out from the camellias arrayed
in front of the inner temple Hands together in prayer
I click on one of the 60%-discount coupons foracondo in the Chiri Mountains
Onto my knees under the printer
a coupon drops down likeacamellia petal I
click the I attached to the camellia petal
Zero categories and 177 sites come up
as the search result for the word I
Searching for I I click each site in order
lunacy movie India and I…splIt
…comIng out…suIng alone…And I, Inc.…
storIes I want to Impart…the earth and I….
I can hear the click of the double-humped camel’s hooves
An oasis is nearby
Continuing on I click therefore I am
Translation: 2004, Walter K. Lew
Labels: English Section, poetry
တစ်နေ့တစ်လံ ဓူဝံကြယ် ဘယ်ပြေးမလဲ
ဗင်ဂိုး… သေကြောင်းကြံ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၁၁၈ နှစ် ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဗင်ဂိုးလို ကြေကွဲမှုတွေ နောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်အောင်
မင်းကွာ မင်းကိုယ်မင်းတောင် အနိုင်နိုင်။ မင်းမိသားစုတောင် အနိုင်နိုင်၊
မင်းမိတ်ဆွေတွေ၊ ချစ်သူတွေတောင် အနိုင်နိုင်။ ဘယ့်နဲ့ကြောင့် မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ချင်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တက်ချင်တာ အဲဒီမဏ္ဍပ်တိုင်ပါ။ လူဟာ လူနဲ့
တူဖို့၊ ပျင်းစရာ လူပုံတူ မဟုတ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လူပုံတူ။
(အင်ဒီဝါးဟိုးရဲ့ ကမ္ဘာ ကဗျာစာအုပ် အဖွင့်စာမျက်နှာမှ)
One day, six feet; where will the Pole Star move to?
It is now 118 years since Van Gogh himself to death. Has the world
that includes me been able to do anything to prevent any more
tragedies like Van Gogh’s from repeating themselves?
You? You could barely help yourself. Or, your family. Or your friends,
your loved ones. Why do you want to show off? You have good reasons
Yes. I do want to show off. So man may be like man. Notaboring
portrait of man. Butacheerful portrait of man.
Thukhamein Hlaing translated by Maung Tha Noe
Labels: English Section, သုခမိန်လှိုင်, မောင်သာနိုး
ဟေမန္တရာသီဟာ ကမ္ဘာမြေကို ဆိုက်ကပ်လို့
ငါ အရုဏ်သောက်လို့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ
ခွေးခြေပုပုပေါ်မှာ ဘဝကို မတည်ဆောက်လိုပါ
ငါ့ရဲ့ မေတ္တာပြည့်သောရင်အုံကို ခိုလှုံခဲ့ချေပြီ
ငါ၏ အကြင်နာထံပါးတွင် ပန်းတို့ အစွမ်းကိုပွင့်ခဲ့ကြပြီ
ငန်းတို့ပျော်ရာ ရေကန်သာသည် ငါ့ထံတွင် တည်ချေပြီ။ ။
Labels: ကဗျာ, မောင်ချောနွယ်
ဒီကဗျာကို လမ်းထိပ်က အပေါင်ဆိုင်မှာသွားပေါင်မယ်
ဤကဗျာကို ငြိမ်းအေးအိမ်ရဲ့face book notes ဒီမိုကရေစီရရင် မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
အဲ့ဒီလူကိုလမ်းမှာတွေ့ရင် သော့အကြောင်းဆက်ပြောချင်ရင်ဖြင့် သော့ပြင်ကုလားဆီသွားပြောဖို့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ။
ဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုး၊ ဒီလို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမျိုးနဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်တို့က ဘာကိုယုံကြည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စား ခင်ဗျားက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါဗျာလို့ ထိုးအပ်ရမတဲ့တုန်း။ လူတွေကိုများ အချဉ်မှတ်လို့။
ဤကဗျာကို ငြိမ်းအေးအိမ်ရဲ့ face book notes မနေ့က ပါးစပ်အမြှုပ်တစီစီထွက်အောင် အတင်းကာရောမဲလာဆွယ်နေတာနဲ့ ဒီကဗျာလေးပေးဖတ်လိုက်တယ်။ မင်းနဲ့ငါ။ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Labels: ကဗျာ, နေမျိူး